Chrome ine chikanganiso chekuchengetedza chinogona kuve chakakomba | Linux Vakapindwa muropa
Chrome ine kukanganisa kwekuchengetedza kunogona kuve kwakakomba; gadziridza izvozvi
Kunyangwe zvinhu zvakati wandei zvakagoverwa pakati pevashandisi veLinux, iyo yakanyanya kushandiswa webhu bhurawuza pasirese ndiyo Chrome yeGoogle. Nechikonzero ichocho, uye nekuti zvakare inoshandiswa muWindows uye macOS, nhau dzakadai dzakakosha. Uye ndeyekuti Google yakanyevera kuti dandemutande rayo raive nechikanganiso chekuchengetedza chakakanganisa mapuratifomu ese arinowanikwa, kunyangwe iine mhinduro iri nyore.
Zvinoenderana neGoogle, iyo chekuchengeteka chikanganiso chakaonekwa chave / chakakanganisa kubva pazasi kusvika kumusoro. Iyi ndiyo CVE-2021-37973, "zuva re zero" rinoshandisa vashandisi vakashandisa. Nhau dzakanaka ndedzekuti chigamba chatove chiripo mune yazvino vhezheni yeChannel, saka kuzvidzivirira kubva kuchikanganiso ichi chekuchengetedza kuri nyore sekuvandudza browser rako.
Google yatove patched chakakomba Chrome bug
Izvozvi, mune Mita peji Iko hakuna kutsanangurwa kwedambudziko, kuchizvisarudzira pacharo muchikamu chino kuti ruzivo rwakachengetedzwa. Kunyange zvakadaro, kunyange hazvo nhau dzakatanga kutenderera pamambure mazuva mashoma apfuura, musi waSeptember 24 chigamba chakaburitswa for the yazvino browser vhezheni. Vashandisi veWindows neveMacOS vakatogamuchira iyo yekuvandudza kubva kune imwechete browser, nepo iyo yeLinux, isingawanzo kunge iri mamiriro ayo anga asati aonekwa munzvimbo yekuchengetera izvo zvimwe zvinogoverwa zvinowedzera pakuisa browser kekutanga kana muAUR muArch. Linux yakavakirwa masisitimu.
Sezvatinogara tichitaura patinoburitsa nhau dzerudzi urwu, zvakakosha kuti software iwedzere kuvandudzwa. Kunyangwe chiri chokwadi kuti dzimwe nguva tinogona kuwana kukundikana kusingatarisirwi, izvi hazvisi zvakajairika, uye nekuisa izvo zvazvino vhezheni tichave tichizoshandisawo zvigamba zvekuchengetedza senge izvo zvinodzivirira vabiridzi kuramba vachikanganisa kuchengetedzwa kweChrome na CVE-2021 -37973.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chrome ine kukanganisa kwekuchengetedza kunogona kuve kwakakomba; gadziridza izvozvi
Uye pakupedzisira, muFirefox 93 rutsigiro rwemhando yemifananidzo yeAVIF yakaitwa
Valheim: mutambo wengano wevhidhiyo unowedzera zvimwe zvitsva